Ekubeni ezenzele igama elihle njengenkampani yoguqulelo lolwimi kangangeminyaka, uSunFlare uqhubeka ezimisele ukuba lihlakani kubaxumi bakhe.
Sinikezela ngeenkonzo ezipheleleyo ezenzelwe iimfuno zamaxwebhu eenkampani asebenza kuwo onke amacandelo ezoshishino.
Siyakwazi ukunikezela ngezisombululo ezaneleyo kubaxumi bethu ngokubona nangokulungisa iingxaki ezinokwenza namaxwebhu ngokukhawuleza nangokuchanileyo.
Agasti 1, 1971
Iofisi Eyintloko YaseTokyo:
Ukulungiselela Ukusetyenziswa Ekuhlaleni
Ukubhala (ngezobugcisa nezonyango)
Iinkonzo zokuyila (ukudizayina, iDTP, iwebhu nevidiyo)
Uphando (imithetho, imiqathango, imimiselo nephathenti)
Ukufayila nenkxaso yeenkqubo (iiphathenti, imicimbi yemiqathango nezixhobo zonyango)
Uviwo Lokufaneleka Komguquleli (TQE)
Iisemina (iiphathenti nezixhobo zonyango)
Yi-ISO 27001, ne-ISO 9001, ne-ISO 17100 kunye nePrivacy Mark (JIPDEC)
Type II Marketing Authorization Holder License for Medical Devices
Sinesatifikethi se-ISO 27001 ne-ISO 9001
Abaxumi bethu baneemfuno ezingafaniyo zamaxwebhu. Ukuze siqiniseke ukuba sinenkqubo ekhuselekileyo yokufumana nokuthumela idatha eyimfihlelo yomxumi kwaye siyakwazi ukufikelela owona mgangatho uphezulu, silandela iinkqubo ezahlukeneyo ezisetyenziswa ehlabathini zokulawula umsebenzi.
Sinamava kumacandelo orhwebo, oshishino nakwimibandelo eyahlukeneyo.
Ukuze siqiniseke ukuba siqhubeka silihlakani loshishino elingathenjwa, amaqela ethu eengcali zorhwebo nezamacandelo ayasebenzisana ukuze anike abaxumi izisombululo ezisemgangathweni kwiingxaki abanazo.
Sithetha iilwimi ezingaphezu kwezingama-70
Xa inkampani ifuna ukukhula ehlabathini jikelele, kufuneka izazi iilwimi nezithethe zawo onke amazwe efuna ukurhweba kuwo. Kuyacaca ukuba ayinakwazeka loo nto kwishishini. Kodwa kwaSunFlare, sineengcali zeelwimi ezingaphezu kwama-70 eziqheleneyo nezithethe zeendawo ekuthethwa kuzo ezo lwimi. Ziyakwazi ukunika abaxumi inkxaso ethe ngqo, efika ngethuba ukuze baphumelele kushishino lwehlabathi. Iingcali zethu zinolwazi oluphangaleleyo kwimibandela ethile olukhatshwa bubuchule obusemagqabini bokusebenzisa ulwimi, nto leyo ebenza bakwazi ukunikela ngeenkonzo ezikhawulezileyo, ezisemagqabini kumaxwebhu afuna ubugcisa obuphezulu, njengamaxwebhu ezomthetho, amanqaku, neenkqubo zemiqathango.